‘आमाको आर्शिवाद’ – NamoBuddha Khabar
बिहिबार, आश्विन ०८, २०७७ | २१:१९:४१ |
अशोक बुद्ध लामा(गुरु),
कुनै एउटा गाउँमा आमाछोरा बस्थे, उनीहरुको आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक थियो । आफ्नो श्रीमान बितेको धेरै समय भएकोले घरको सबै कामको जिम्मेवारी उनलाई थियो बिहानैदेखी काममा घोटिएमात्रै हातमुख जोड्न पुग्दथे । घरको नाजुक अवस्था उनका छोरालाई राम्रोसँग थाहा थियो र महसुुस पनि गर्दथे ।
छोरा स्वस्थानी कथाको नवराज जस्तो थिए । दिए खान्थे,नदिए पनि केही बोल्दैन थिए । साथीभाइसँग कहिल्यै झगडा गर्दैनथे, मिलेर बस्दथे, खेल्दथे,केही उछृङ्खल साथीहरुले सताउंथे तर पनि सहन्थे किनकी उ साथीहरुको मामिलामा युद्धिष्टीर जस्ता थिए ।
एकदिन गाउँमा एउटा भेला हुँदा छोरालाई एकजना साथीले भन्न थाल्छन् “ओइ तिमीहरु अलाछिनाको भएकोले तिमी जन्मेर केही समयपछि तिम्रो बुबा बितेको रे ! ” यस्तो वचन सुनेपछि छोराको मनमा बज्रवाण लागेजस्तो अभाष हुन्छ र गाउँ नै थर्किने गरि रुंदै,छटवटिदै घर जान्छ,मानौ उनको शरीरमा वाण लागेको छ ।
उनको चित्कार सुनेपछि आमा सहित गाउँले पनि जम्मा हुन्छ । आमाले यस्तो कुरा सुनेपछि छोराको साथीलाई गाली गर्छिन् । त्यो साथीको आमाले प्रतिकार गर्छिन्–“हो तिमीहरु अलाछिनाको सन्तान हौ ।” उनि गाउँकै धनी भएकोले उनको नजरमा राम्रो भन्नको लागि सबै उनैको पक्ष लिन्छ । त्यसपछि आमाले सहन नसकी भन्न थाल्छिन् –“सुर्यदेव ! यदि भगवान हो र छ भने, सत्य हो भने मेरो छोरा यो देशको राजा होस र हुनुपर्छ ।” आफ्नी छोरालाई “तँ यो देशको राजा भएस्” भनेर आशिर्वाद दिन्छिन् । गाउँलेहरु खिसी गरेर गलल हाँस्छन् र भन्छन् “कस्ता–कस्ता कहाँ गए मुसाको छोरा दरबार ।”
केही दिनपछि एकजना साधु ध्यान बस्ने क्रममा त्यो गाउँ आइपुग्छन् र ध्यानमा बसेर आफ्नो शिष्य बनाएर संसारमा शान्ति फैलाउने प्रण गर्छन् ,त्यसपछि उनले गाउँमा सबै हेर्दा धन सम्पत्तिको लोभ देखाउँछन् । साधुले ती छोरामा अध्यात्माको गुण देख्छन्, साधुले छोरालाई दिक्ष दिन थाल्छन् । उनले यसरी सिक्न थाल्छन् कि उनको ध्यान अर्जुनको जस्तो । आफ्ना गुरुलाई एक्लव्यले जस्तो सम्मान गर्छन् । गुरुले धर्मशास्त्र, चानक्य नीति, विदुरनीति, तरवारवाज, युद्ध कला सबै सिकाउँछन् । अरुलाई सिक्न १२ बर्ष लाग्ने कला उनले केही महिनामै सिकिसक्छन् ।
ती साधु राजाको सल्लाहकार पनि थिए । राजाको सन्तान थिएनन् र राजा वृद्धअवस्था भएको कारण साधुलाई राजाले सोध्छन्–“म अब डुब्न लागेको घाम भएँ,मेरा सन्तान छैनन् ,यो देशको राजकाज कसले सम्हाल्ने होला ? बढो चिन्तित छु ।”
उनले यसरी सिक्न थाल्छन् कि उनको ध्यान अर्जुनको जस्तो । आफ्ना गुरुलाई एक्लव्यले जस्तो सम्मान गर्छन् ।
साधुले आफ्नो चेला हरेक विधामा निपुण रहेको भन्दै उनलाई राजा बनाउन सल्लाह दिन्छन् । राजाले साधुको कुरा स्विकार गर्छन् । केही समयपछि राजाको निधन हुन्छ । ती छोरालाई राज्यअभिषेक गर्छन् । छोराले पहिलेको राजाले भन्दा कुशलताकासाथ राज्य चलाउँछन् , किनकि उनमा हरेक ज्ञान थियो !
(लेखक रोशी साहित्य मञ्चका सचिव हुनुहुन्छ ।)